Ilu 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe mere e ji dee ilu (1-7)
Nsogbu iso ndị enyi ọjọọ na-akpata (8-19)
Ezigbo amamihe na-eti mkpu n’ámá obodo (20-33)
1 Ilu dị iche iche Solomọn+ nwa Devid,+ bụ́ eze Izrel,+ tụrụ: 2 E dere ilu ndị a ka mmadụ si na ha mara ihe,+ ka a dọọkwa ya aka ná ntị;Ka mmadụ si na ha ghọta okwu e ji amamihe kwuo; 3 Ka mmadụ wee nabata aka ná ntị a dọrọ ya+ nke ga-eme ka ọ na-aghọta ihe,Ka o wee bụrụ onye ezi omume,+ onye na-ele ihe anya otú kwesịrị ekwesị,*+ na onye na-akwụwa aka ọtọ; 4 Ka ndị na-amaghị ihe si na ha mara ihe;+Ka nwa okorobịa si na ha mụta ihe ma na-eche echiche nke ọma.+ 5 Onye ma ihe na-ege ntị ka ọ mụtakwuo ihe.+Onye na-aghọta ihe na-anabata ezigbo ntụziaka,+ 6 Ka o wee ghọta ilu na okwu na-agbagwoju anya,Okwu ndị ma ihe kwuru nakwa ilu ha tụrụ.+ 7 Otú mmadụ si egosi na ya amatawala ihe bụ ịtụ egwu Jehova.+ Ndị nzuzu anaghị eji amamihe na ịdọ aka ná ntị akpọrọ ihe.+ 8 Nwa m, nabata aka ná ntị* nna gị na-adọ gị,+Ahapụkwala ntụziaka* nne gị nyere gị.+ 9 Ha dị ka okpu mara mma e ji okooko kpaa nke ị ga-ekpu n’isi,+Dịrịkwa ka ọmarịcha ihe olu ị ga-anya n’olu.+ 10 Nwa m, ọ bụrụ na ndị mmehie agbawa mbọ ka ha rata gị, ekwela.+ 11 Ọ bụrụ na ha asị: “Soro anyị. Ka anyị gaa chechie ndị mmadụ gbuo ha.* Anyị ga-amakpuru n’ebe zoro ezo, chebiri ndị aka ha dị ọcha. 12 Anyị ga-elo ha otú ili* si elo mmadụ,Anyị ga-elocha ha otú olulu si elocha ndị na-abanye na ya. 13 Ka anyị kwakọrọ ihe niile bara ezigbo uru ha nwere. Anyị ga-eji ihe ndị anyị kwatara kwajuo ụlọ anyị. 14 I kwesịrị ịbịa soro anyị. Anyị niile ga-eke ihe anyị zutere, ihe otu onye ketara ka ibe ya ga-eketa.” 15 Nwa m, esola ha. Etinyela isi n’ụzọ ha,+ 16 N’ihi na ha* na-eji ọsọ aga eme ihe ọjọọ. Ha na-eme ngwa ngwa aga egbu mmadụ.*+ 17 N’eziokwu, ọ bụ n’efu ka mmadụ na-agbasa ụgbụ ọ ga-eji jide nnụnụ ma ọ bụrụ na nnụnụ ahụ na-ahụ ya. 18 Ọ bụ ya mere ha ji aga ezo ka ha gbuo mmadụ.* Ha na-amakpuru n’ebe zoro ezo ka ha gbuo ndị ọzọ. 19 Ọ bụ ihe ndị a ka ndị na-aghọ aghụghọ ka ha baa ọgaranya na-eme. Akụ̀ ha na-enweta ga-ata isi ha.+ 20 Ezigbo amamihe+ na-eti mkpu n’okporo ámá.+ Ọ na-etisi mkpu ike n’ámá obodo.+ 21 Ọ na-anọ n’isi okporo ụzọ ndị na-ekwo ekwo akpọ òkù. Ọ na-anọ n’ebe e si abanye n’ọnụ ụzọ ámá obodo, na-asị:+ 22 “Unu ndị na-amaghị ihe, olee mgbe unu ga-akwụsị ime iberiibe? Unu ndị na-akwa ndị mmadụ emo, olee mgbe ịkwa ndị mmadụ emo ga-akwụsị ịtọ unu ụtọ? Unu ndị nzuzu, olee mgbe unu ga-amụta ihe?+ 23 Nabatanụ aka ná ntị m na-adọ unu.+ M ga-enyezi unu amamihe.* M ga-akụziri unu okwu m.+ 24 Ebe ọ bụ na m kpọrọ òkù, ma unu ekweghị aza,M matịrị aka m, ma e nweghị onye mere ihe ọ bụla,+ 25 E nweghị ihe unu ji ndụmọdụ niile m na-enye unu kpọrọ,Unu anabataghịkwa aka ná ntị m na-adọ unu, 26 M ga-achịkwa unu ọchị mgbe ọdachi ga-adakwasị unu. M ga-akwa unu emo mgbe ihe unu na-atụ ụjọ ya ga-eme,+ 27 Mgbe ihe unu na-atụ ụjọ ya ga-abịa ka oké ifufe,Mgbe ọdachi ga-adakwasị unu ka oké ifufe mmiri,Mgbe ahụhụ na nsogbu ga-abịara unu. 28 N’oge ahụ, unu* ga na-akpọ m, ma agaghị m aza. Unu ga na-achọsi m ike, ma unu agaghị achọta m,+ 29 N’ihi na e nweghị ihe unu ji ịmụta ihe kpọrọ,+Unu achọghịkwa ịtụ egwu Jehova.+ 30 Unu anabataghị ndụmọdụ m. E nweghị ihe unu ji aka ná ntị niile m na-adọ unu kpọrọ. 31 N’ihi ya, unu ga-eji isi unu buru ihe unu metara,*+Atụmatụ* unu ga-etinye unu ná nsogbu.* 32 N’ihi na ihe ga-egbu ndị na-amaghị ihe bụ isi ha na-enupụ,Ndị nzuzu ga-alakwa n’iyi maka na ha anaghị eji ihe akpọrọ ihe. 33 Ma obi ga-eru onye na-ege m ntị ala,+Ụjọ ọdachi agaghịkwa atụ ya.”+
^ Ma ọ bụ “onye na-ekpebi ime ihe ziri ezi.”
^ Na Hibru, “ṅaa ntị n’aka ná ntị.”
^ Na Hibru, “ga-awụsa unu mmụọ m.” O nwere ike ịbụ amamihe nke mmụọ nsọ Chineke na-eme ka mmadụ nwee.
^ Na Hibru, “ha.” N’ebe niile e dere “unu” n’amaokwu a nakwa n’amaokwu 29 ruo 31, ihe ọ bụ n’asụsụ Hibru bụ “ha.”
^ Na Hibru, “ha ga-eri mkpụrụ ụzọ ha mịpụtara.”
^ Na Hibru, “Ndụmọdụ.”
^ Ma ọ bụ “ga-atọchi unu akpịrị.”